Saakay ayaa waxaa ka dhacay magaalada muqdisho dil iyo dhaawac loo geestay haween – STAR FM SOMALIA
Saakay ayaa waxaa ka dhacay magaalada muqdisho dil iyo dhaawac loo geestay haween
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degmada Dharkiinley ee Magaalada Muqdisho kooxo hubaysan, ayaa Degmadaasi saaka ku weeraray labo Haween ah.
Labada Haweenka ah ee la weeraray ayaa wada socday, waxaana ay u socdeen goobtooda shaqada, xilliga weerarka uu dhacaayay.
Mid ka mid ah labada Haweenka ah ayaa la dilay, halka mida kalena uu dhaawac ka soo gaaray rasaastii ay la beegsadeen Kooxaha hubaysan.
Lama oga Haweenkaan sababta loo beegsaday iyo rasmi ahaan halka ay ka shaqeeyaan, hayeeshe dhaawaca Haweenayda ayaa la dhigay Isbitaal Madiina oo lagu dabiibayaa.
Ragii hubaysnaa ee Bistooladaha watay ayaa ka baxsaday goobta ay ku dileen haweenaydaasi, waxaana Durbadiiba meesha yimid ciidamada ammaanka Degmada Dharkiinley.
Weerarka Haweenaydan lagu dilay, mida kalena lagu dhaawacay ayaa ku soo aadaya, iyadoo xalay Magaalada Muqdisho lagu dilay haweenay da’ ah oo Rag hubaysan ay ku toogteen Xaafada Saybiyaano ee Degmada Hodan.
Dooni ay Saarnaayeen Boqolaal qof oo Soomaali ah oo ku degtay Badda iyo dad badan oo ku dhintay
Guddiyada Baarlamaanka oo ka hadlaya qaabka loo wajahayo doorashada 2016